Izindaba - Zingaki izinhlobo zezingubo zokugqoka ezikhona?
Izingubo zokungcebeleka ngokuvamile zingahlukaniswa zibe ezokuzilibazisa nge-avant-garde, ezokungcebeleka kwezemidlalo, ezokungcebeleka kwezothando, ezamabhizinisi nezokungcebeleka zasemakhaya.
1.Avant garde bafake okwejwayelekile:
Ukugqoka okwejwayelekile kwe-Avant-garde, okwaziwa nangokuthi imfashini ukugqoka okwejwayelekile, kuyinsakavukela yezingubo ezithandwayo ezenziwe ngomumo, ezibonisa ngokuphelele isitayela sokuklama, ubuciko bokudizayina nokuqondisa umkhombandlela wemfashini. Ngesikhathi semfashini yokuzilibazisa, abasiki bengqephu ezindlunkulu ezinkulu zemfashini bakhipha izingubo ezibizwa ngokuthi ezisezingeni eliphezulu nezisezingeni eliphezulu ezilungiselelwe umhlaba kabili ngonyaka, iningi lazo okuyisitayela se-avant-garde. Isici esivamile sokugqoka okuvamile kwe-avant-garde ukuthi kusetshenziswe inani elikhulu lezindwangu ezintsha noma ezintsha, isitayela sehlukile, umumo yi-avant-garde, futhi umbala nephethini kwehlukile. Ukuze sihlangabezane nokunambitheka kwabantu abasha bemfashini futhi siqondise imfashini esika onqenqemeni, sizama konke okusemandleni ukubonisa ubungqayizivele besitayela somkhiqizo nobuciko bokudizayina. Emakethe, ukugqokwa kwesitayela sasemadolobheni okunamaqembu ahlukahlukene okusetshenziswa kwemfashini kanye nokuma ngobuhle nakho kungokwalolu hlobo lwezingubo, kepha ukuzivumelanisa nezimo kwalo kubanzi kakhulu, futhi isitayela ngeke sehluke kakhulu.
Izingubo zezemidlalo akuyona imvunulo yezemidlalo yokuncintisana egqokwa abagijimi abangochwepheshe, kepha uhlobo lwezingubo zemidlalo ezinezemidlalo. Ezemidlalo ukugqoka okungajwayelekile kwenzelwe ukuhlangabezana nemisebenzi ethile yezemidlalo, engakhombisa umuzwa kanye nesitayela esinamandla semidlalo kwezemidlalo yokuzilibazisa. Ukuma kwezingubo zemidlalo kuvame ukusondela endleleni yezemidlalo, ngokuqina okulingene, umbala ogqamile, okulula ukwelula nokusebenza okuhle. Ukuma kwayo, ukusebenza kwayo kanye nokuguquguquka kwayo bekuhlale kuthandwa ngumphakathi, ikakhulukazi intsha. Ngokuya ngomqondo odumile wobuhle, izingubo zemidlalo zigxila kwikhwalithi yezinto zokwakha, ubuchwepheshe bokusika kanye nempumelelo noma ukwehluleka kwemodi yokusebenza komkhiqizo ukuthola inani lemakethe yemikhiqizo.
Ukugqoka okwe-Romantic uhlobo oluthile lwezingubo ezingajwayelekile ezinemizwa yothando. Okuthiwa ukugqoka kwamantombazane, okokugqoka kwamakhosikazi nokunye okugqokwa ekhaya kuyizigaba ezijwayelekile emakethe. Izici ezivamile zokugqoka okwejwayelekile yothando yimigqa ethambile nebushelelezi, imibala ecebile, isithombe esikhulu nesikhulu sokumodela, isitayela sokhilimu esithambile futhi esimnandi, amaphethini opopayi amnandi futhi athandekayo, kanye nenani elikhulu lezinto zokuhlobisa ezinjengezintambo, umnsalo, i-wave durian, imifekethiso nezinye izinto zokuhlobisa zisetshenziswa kabanzi ukudala isimo sangempela sothando nesitayela sokuphumula.
4.Ibhizinisi ukugqoka okwejwayelekile:
Ukugqoka okwebhizinisi okwejwayelekile, okwaziwa nangokuthi ukugqoka okwejwayelekile, kuyigama elibonakala liphikisana, kepha kusukela esimweni samanje sezingubo zabantu banamuhla, noma ngezikhathi ezinzima zebhizinisi, ukuhlanganiswa kwesitayela sokungcebeleka akunakugwenywa. Ngakho-ke, ukugqoka kwebhizinisi okungajwayelekile kungabonakala njengokuhluka kwengubo yebhizinisi, okuyinhlanganisela ephilayo yemodeli yokugqoka esemthethweni nezinto zokuzilibazisa ezithandwayo. Ukwakhiwa kwalolu hlobo lwezingubo ngokuyisisekelo kugcina uhlaka lokumodela kanye nesitayela esiyisisekelo sengubo ehlelekile. Igxila emininingwaneni yesakhiwo, izakhi zezinto, umbala, indwangu, nezindlela zobuchwepheshe ukwenza ukulungisa okuthile, ukuze kuhlanganiswe kahle izinto ezithandwayo zesitayela sokungcebeleka engutsheni yebhizinisi, ukuze kuzuzwe okuqinile kepha hhayi okuqinile, umphumela ongajwayelekile, ukuze kuthuthukiswe ukusondelana emsebenzini.
5. Ukugqoka okwejwayelekile ezweni:
Isitayela sezwe ukugqoka okungajwayelekile ukugqoka okude kakhulu emlandweni. Eqinisweni, izingubo ezazigqokwa abanumzane bezwe ngekhulu le-19 leminyaka kwakuyizibonelo zokugqoka kwezokungcebeleka zesimanje, ikakhulukazi emkhakheni wokugqoka kwamadoda. Izinto ezilula, ukumodela okungajwayelekile nokunethezeka nesitayela samahhala se-ore eshaqisayo sekuyimizwa yangempela yabantu ababuyela emvelweni kanye nokukhuthaza imvelo. Ukugqoka okwejwayelekile emaphandleni kuwuhlobo lwezingubo zokuzilibazisa ezigqokwa abantu besimanje basemadolobheni abanemizwa yasemaphandleni, ekhombisa ukwakheka kwesifiso sanamuhla kwabantu. Iqhutshwa yisifunda, izikhathi nemizwa yobuhle yomuntu siqu, izingubo zokungcebeleka zasemakhaya zihlanganiswa ngezindlela ezahlukahlukene emakethe, ezinjengokuthi "ukugqoka kwesitayela sikazwelonke", "ukugqoka kwesitayela sabantu", "ezokuvakasha kanye neholide lokungcebeleka kwangaphandle".